Ama mbupu - Bayu The Label
Ozi ntanetị dị mkpa
- Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ihe ngosi nke oge nnyefe oge gị na obodo gị, biko tinye ihe ịchọrọ n'ọdụ ụgbọ ala gị. Ọ bụrụ na ịpị "Cart", ị ga-ahụ "Mpempe ego ọnụahịa". Biko jupụta obodo gị na zip zip ma ị ga-ahụ ihe gosiri na ị na-enyefe oge na ozi ndị ọzọ.
- Ọ bụrụ na ịhọrọ maka "Express Mail Service" (EMS) mgbe ahụ anyị na-ezite ya na igbe akwụkwọ ozi nkịtị. Ị gaghị enweta Usoro Track na Trace ma ị gaghị enwe mkpuchi mgbe ngwugwu ahụ furu efu. Bayu The Label enweghị ike ịza ajụjụ na anyị anaghị anabata ọrụ ọ bụla maka ngwugwu ahụ.
Ọ bụrụ na ngwugwu a furu efu, ọ dị mwute ikwu na ihe ọ bụla anyị nwere ike imere gị.
Ọ bụ ya mere usoro a ji bụrụ n'efu
Oge ngosi oge
- Anyị enweghị ike ikwu ma ọ bụ mee amụma ọbụla mgbe ngwugwu ga-abata.
Anyị nwere ike inye gị ihe ngosi. Oge nnyefe ahụ nwere ike ịrụ ọrụ site na ụlọ ọrụ mbupu na omenala na anyị apụghị ịchịkwa otu n'ime ụlọ ọrụ ndị a, ọ dị mwute.
Dutch nyere iwu
- Nchịkọta nchịkọta nyere na Netherlands na Track & Chọpụta ma a gaghị ezigara mkpuchi na igbe ozi igbe. Ọ na-emekarị nchịkọta a na-abata n'ime ụbọchị 2. Otú ọ dị, na ihe omume a na-adịghị ahụkebe, ngwugwu furu efu, PostNL agaghị eme nchọpụta ịchọta ngwugwu ma Bayu The Label enweghị ike ịza ajụjụ.